यता नेपालमा शिवरात्री, उता मेक्सिकोमा गाँजाका विषयमा ऐतिहासिक निर्णय ! - Mero Mechinagar
गृह अन्तर्राष्ट्रिययता नेपालमा शिवरात्री, उता मेक्सिकोमा गाँजाका विषयमा ऐतिहासिक निर्णय !
अन्तर्राष्ट्रियस्वास्थ्य / जीवन शैली
यता नेपालमा शिवरात्री, उता मेक्सिकोमा गाँजाका विषयमा ऐतिहासिक निर्णय !
काठमाडौं। नेपाल, भारतसहित हिन्दू बाहुल्यता भएका क्षेत्रमा शिवरात्री मनाइँदै गर्दा उता उत्तरु अमेरिकी देश मेक्सिकोमा गाँजाका विषयमा ऐतिहासिक निर्णय भएको छ । गाँजालाई भगवान शिवसँग जोडेर हेरिने भएकोले नेपालमा शिवरात्रीका दिन गाँजाको प्रयोग धेरै हुन्छ । नेपालमा गाँजाको प्रयोग भइरहेको दिनमै मेक्सिकोको संसदले गाँजालाई कानुनी रुपमा वैधानिकता दिने गरी एक विधेयक पारित गरेको छ ।
अघिल्लो लेखमाह्वाट्सएपको नयाँ फिचर, अब हुने छैन च्याट लिक
अर्को लेखमाएमालेमा ओलीको निर्णय : महासचिवबाहेक सबै पदाधिकारी खारेज, बादल बने वाग्मती प्रदेश इन्चार्ज